Madaxweynaha Puntland oo magacaabay taliyaha sugida amniga xilliga doorashada Puntland 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo magacaabay taliyaha sugida amniga xilliga doorashada Puntland 2019
December 10, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cabdirisaaq Siciid Diiriye. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Cabdirisaaq Siciid Diiriye u magacaabay taliyaha sugida amniga ee xilliga doorashada Puntland 2019, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Isniin ah.
Cabdirisaaq ayaa ah taliyaha ciidamada badda Puntland ee PMPF.
Doorashada madaxtinimada Puntland ayaa la filayaa in ay dhacdo 8-da Janaayo ee sanadka 2019.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo diyaaradood oo sida 84 qof oo Soomaali ah ayaa Jimcadii soo gaaray magaalada Muqdisho, ee caasimada Soomaaliya. Dadka ayaa laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka, sida ay warbaahinta u sheegeen masuuliyiinta Dowladda Federaalka [...]